Hirshabeelle oo sameysatay wasaarad cusub ka dib shirkii London (Xog) ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Wararka Hirshabeelle oo sameysatay wasaarad cusub ka dib shirkii London (Xog)
Hirshabeelle oo sameysatay wasaarad cusub ka dib shirkii London (Xog)
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cbadi Waare ayaa la shegay in uu isbedello badan ku sameeyay qaar ka mid ah wasaaradihii maamulkaasi, isagoona wasaarad cusub ku soo kordhiyay maamulkiisa.
Dr Waare ayaa sameeyay isbedel dhanka wasaaradaha ah, Wuxuuna wasaaradii Biyaha iyo Korontada u badelay wasaarada Biyaha iyo Macdanta, isagoona soo kordhiyay wasaarada Batroolka iyo Macdanta.
Wasaarada Batroolka iyo Macdanta horey ugameysan jirin maamulkaasi iyadoona haatan lagu soo kordhiyay wasaaraha Hirshabeelle, kadib shirkii ka dhacay magaalada London ee dalka UK ee lagu soo bandhiyay shidaalka Soomaaliya.
Waxaana Shirkaasi lagu sheegay in shidaalka Soomaaliya ku jira meelaha uu u badanyahay ay ka mid yihiin deegano ka tirsan maamulka Hirshabeelle.
Madaxweyne Waare ayaa aaminsan in shidaalka Soomaaliya qeybtiisa ugu badan uu ku jiro deegaanada Hirshabeelle, Taasi oo dhalisay in uu Waare si dhaqso ah u sameeyo Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta oo aan horey uga jirin maamulkaasi, sida aan ku heleyno xogta.
Wuxuuna Waare sheegay in dhulka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan dhulka xeeebta uu ku jiro shidaal taajir ka dhigaya Hirshabeelle, hadii la fiirso dhulalka kale ee wadankane usan jirin dhul lala meel dhigi karro.
Sababta sida deg dega ah loogu aasaasay Wasaaradda Batroolka ayaa ah si ay uga qeyb gasho shirarka looga arinsanayo shidaalka Soomaaliya, una matsho maamulka Hirshabeelle.
Maamul gobaleedka Hirshabeelle ayaa noqonaya maamulkii ugu horeeyay ee sameysta wasaarad Batrool, ka dib markii shirkii London lagu muujiyay in ay Soomaaliya ka mid tahay dalalka shidaalka qaniga ku ah, haba u badnaadeene deegandda Hirshbeelle.
Previous articleRW Kheyre oo gudoomiyay shir ka dhacay wasaarada Ganacsiga (Sawirro)
Next articleCiidamo Mareykan iyo Somali ah & Al-Shabaab oo ku dagaalamay Janaale